WWIT - libya-canada.org
WWIT – Izu 12 nke Izu – Akwụkwọ DFFL
Izu nke iri na abụọ – “Ndị Herman” na-agba ọsọ oge
Gbaghara m ka m na-eku ume. Mụ na Kọmishị Francis na-ekwurita banyere ndị na-agba bọọlụ egwuregwu mbido taa, dị ka nnukwute igwe, wepụtara onwe m maka ọrụ m website Id ịmalite ọrụ nke ịtọ esemokwu ụzọ atọ, njikọ ụzọ anọ, na ọbụna njikọ 5 nke nwere ike ime mgbe ájá ahụ kwụsịrị na Izu 13. (Zigara m ndị otu niile na-egosi email nyocha ihu abụọ na-egosi tiebreakers taa.)
Wonderful goin’, Experts. O were ogologo oge, na WWIT na-egbu oge. (Ed. Rịba ama: Amaara m – ọ dịghị nnukwu ihe, naanị mmadụ isii na-agụ ya, agbanyeghị.) Ọfọn, gbuo ya oge ọzọ, lee mpịakọta nke iri na abụọ, nke iri na abụọ nke akwụkwọ parakeet ahụ kacha amasị
Gbanyụọ anyị na Professional Section. – Ma, gịnị bụ ihe a? O dighi izu zuru oke na izu uka a? Oooh, MGL enwetaghị akara ngwụcha izu gara aga. Ma, anyị nwere ìgwè abụọ nke naanị ihe 4 furu efu t seat – Rob Mielke (BTW, ụbọchị ọmụmụ obi ụtọ, Rob!) , Na onye na-asọ mpi nke abụọ t Enforcement Division na-egwu egwu, Robert Abundis nke Na-egbu Ubi. Robert siri ezigbo ike n’oge na-adịbeghị anya, ọ bụ naanị ihe egwuregwu ya nwere ike ijide “Ant-Man”. Rob na Robert nwetara 7 Expert isi maka mbọ ahụ.
Ihe nrite ọla ọcha”Expert”n’izu that a na-aga na ndị otu # 1 anyị na DFFL, Alan Sullivan nke Reaper, onye tufuru naanị 6 isi na oche ya. Ọ bụ 10-2, ma lee anya na-enweghị ike imeri. Ka anyị nye nrite ọla nchara ngwụcha izu a ma Ron Bolton nke ‘Gunners, na Ryan Francis nke Aha Gị Ebe a / LGJ a ma ama, onye tufuru 7 isi na oche ha. Ọ dịghị daashi ihe n’izu a, M na-eche “Scrooge-y.”
Ọ D OK MMA, lee otu ha si guzo ugbu a mgbe izu nke 12 nke 2018 DFFL Professional Division gasịrị, naanị izu 1 nke egwuregwu fọdụrụ….
MGBE MBEN – IZU IHE 12 – DFFL 2018
1. Mazị Gaa kechioma (44.5 isi) – Ruo n’ọsọ ịnyịnya abụọ, ọ bụ naanị otu izu iji gaa
2. Ubi na-egbu egbu (ihe 40) – Ihe ngosi ọzọ siri ike si n’aka Robert, nwere ike imeri ya niile
3. Mkpọchi (isi 33) – Ọdịiche 7 nke Lockett na-efu ya ihe ndị achọrọ iji maa aka
3. Burbank Thumpers (33 isi) – Giorgio Tavecchio ka na-egwu egwu. Kedu nke na-eme?
5. Aha gị Ebe a (isi 32) – Mere ọsọ, mana ihe nketa “YNH” nwetara n’ụzọ
6. Run & Gun (ihe 27) – Ọ ga-alaghachi maka ohere na aha 2019
7. Onye na-ewe ihe ubi (24 isi) – “Onye na-ewe ihe ubi” na-eme ka mmeri ahụ kwụsị
8. Trojans (isi 21) – Otu kachasị mma agaghị agwakọta egwuregwu na 2018 – website wont FAR
9. Baltimore Ravens (isi 20) – Umm…. Kedu ihe na-eme ebe a? WWIT isi?
10. Norsemen (ihe 15) – Ọ bụ Bolts vesos ndị Norsemen maka Lombardi Division
11. Otu ndi agha (ihe 10) – Ama m otu ọ dị gị, Jesu. Lelee akara m.
12. Total Pilt Poker (ihe 8) – WWIT isi na izu nke 12 iji mechaa afọ. Dị nnọọ ukwuu.
Ma akara – (Sigh) Ee, ama m.
Dị ka anyị na-ekwu “adios” maka ụmụ okorobịa nwere ọgụgụ isi, anyị ga-agakwuru ndị maara ihe $ $ e $, anyị nwetakwara ’em. Enweghị m ike ichere, ka anyị nweta ya, ka anyị ga-? Oge eruola ka ị mata onye na-egwuri egwu dị ka Jerry Rice, na ndị na-egwuri egwu dị ka Leon Lett. – Oge eruola ịjụ ajụjụ….
Aga m ejikwa nke a dịka m na-ejikwa Band-Aids. Ana m aga RIP IT OFF. Grant Herman emeela un ọzọ – Ọ mechara nke mbụn’egwuregwu ị chọrọ ịkwụsị LAST na – WWIT. Ọ tụfuru isi 20 na oche ya, mgbe ọ na-ejighara egwuregwu Bronco / Steeler, nke dị mma maka isi 7 WWIT. Ihe goofy ndị that a ka buliri un ụzọ mbụ website t isi asatọ, na egwuregwu na-enyekarị 7 kwa izu. O meriri Enforcement Division ugboro atọ, gụnyere afọ gara aga. Ma – Ọ dị ugbu a otu izu ka ọ ghara ijide ihe mbụ WWIT. Ọ ghaghị ịlele ụmụ agbọghọ na-arụ ọrụ, kama wiver wiver. Good goin ‘,’ nwa nwoke!
Ka anyị nye ọla ọcha WWIT nke ngwụcha izu a ka nke gị nke poker zuru ezu, nke tufuru 17 isi na oche ya, n’akụkụ maka benching Mike Williams nke chaja. N’ezie na-akpali akpali. Mwepu-5 WWIT isi maka nke ahụ, gbakwunyere two ihe goofy ndị ọzọ maka Benching Watson.
Ahh, ee, ọla nchara. Ọ na-aga na Jose Cano nke Burbank Thumpers,n’ihi na ọ ga-efunahụ 16 isi t seat ya. Mana nke ahụ abụghị ihe niile… José malitere ochie kicker maka Falcs, Tavecchio, nwa okorobịa nke na-anataghị ọbụna izu, kama seat kicker, Boswell, onye, ​​ọ bụrụ d e ọ malitere Steerler booter, ga-emeri ya izu 12 egwuregwu megide Jim Francis’Bolts. Nke ahụ dị mma maka mwepu-3 WWIT isi, ma mwepu-2 karịa maka ịmalite goofy kicker ahụ ọzọ. Obere ihe edetu ebe a, n’oge a – Jose kwesiri ịhọrọ ịmalite ọkpụkpọ efu efu ahụ ọzọ, ọ nwere ike nweta akara ngosi 2018 WWIT ozugbo. Anyị ga-ahụ.
Enweghị isi WWIT ndị ọzọ na ngwụsị izu a. Gịnị ka a pụrụ ikwu? Ọ bụ DFFL. (Ọchị)
Ọ D MMA, lee ndị that a ka emelitere WWIT Standings. Otu izu ọzọ, m na-ekwe gị nkwa, Ọ BING ihe ọ bụla nwere ike ime….
G WASN WAS Y I NA-ECHE EGO – IZI IRI NA 12 – 2018
1. Nnụnụ Unyi (-33 isi) – “Oge ọsọ” na-egbu oge na-etinye nnụnụ-nwoke n’elu, yana otu izu iji gaa.
2. Mara mma Ogbe Ndịda Burbank (-26 isi) – B NOTGH begin amalite t Italian PK ọzọ.
3. Hoarse-Men (-25 isi) – Rob ga-adaba kpamkpam iji nwee ohere ọ bụla
4. Pop-Gun-agba ọsọ (-24 isi) – Ọ bụghị nọ ebe a, agbanyeghị. Enweghị ohere.
4. Ihe Na-enweghị Aha (-24 isi) – Mkpa a “itufu” itoolu maka tie, ogologo-shot
6. Nsogbu Trojans (-23 isi) – Zere akara WWIT na Izu 12, ọ pụọ na ya
6. Kasị njọ Gosi na Akwụkwọ (-23 isi) – Iri isi ala.. Enweghị dais.
8. Grim Reeker (-22 isi) – Playa ọzọ na-enweghị ohere.
9. Nwụrụ Anwụ na Ubi (-19 isi) – Inwe GREAT Professional afọ!
10. Poker zuru ezu nke egosiputa (-18 isi) -Ọbụghị m enweghị ike ị nweta akara WWIT iri na ise n’otu izu.
11. Mazi Maazị-Ọchichọ (-10 isi) – Phhh…. Um, Ọ dịghị.
11. Dolts (-10 isi) – Ọ dịghị mgbe ọ bụla na nke a, ma anyị nwere depụta aha ebe a.
Ọfọn, nke ahụ bụ ihe niile maka izu a, ndị enyi. Jisie ike na ndị otu niile na-alụ ọgụ maka ọnọdụ na 2018 DFFL Playoffs. Mee nhọrọ gị niile nke onye ọkpụkpọ ịchọrọ ịmalite ịmalite karịa nke m (Enweghị nnukwu ọrụ, ebe ahụ). Anyị ga-ahụ gị n’izu ọzọ maka agba nke WWIT!
Dị ka oge niile, enwere m ozi ịntanetị niile iji zipu akwụkwọ parakeet kwa izu, na Tuesday, na-agakarị na ehihie. Fọdụ n’ime unu enweghị Microsoft Office / Word? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, lelee WWIT kwa izu na www.theacescasinoblog.com. Ọ ga-anọ ebe ahụ! Nwee ezigbo izu!